डाक्टरले लगाउने पीपीई बनाउन महावीर पुनले पाए स्वीकृति 'कसैसँग टफेटा भए खबर गर्नू, म लिन्छु'
‘प्रोपर पीपीई पनि छैन । राम्रो पीपीई त तलदेखि माथिसम्मको एउटै हुन्छ । बुट छैन । भाइजर छैन । क्याप छैन । ल भन्नुहोस् त कसरी काम गरिरहेका छौँ ? कति जोखिम छ । यही भवनमा कोरोना बिरामी हुनुहुन्छ । सर्‍यो भने पहिले हामीलाई सर्छ । उहाँहरूको उपचार गर्ने त हामीले हो नि !’
बुधबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका एक डाक्टरले हामीसँग गरेको गुनासो थियो यो ।
पीपीईको अभाव भएको खबर सुनेलगत्तै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन पीपीई बनाउने अभियानमा जुटे । सुरुमा उनले पीपीईको स्याम्पल बनाए । त्यो स्याम्पल डाक्टरबाट स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत भएलगत्तै बजारमा देखिएको पीपीईको अभाव कम हुने आशा जगाएको छ ।
‘बुधबार दुईवटा स्याम्पल बनाएका थियौँ । त्यो स्याम्पल डा. भगवान कोइरालालाई देखायौँ । उहाँले यो सङ्कटमा यतिको भए हुन्छ, राम्रो छ भन्नुभयो । त्यसपछि आजै सिलाउनका लागि गार्मेन्टमा दिएका छौँ’, शिलापत्रसँग पुनले भने ।
आजैदेखि पीपीई बनाउन सुरु गरिएकाे उनले बताए ।
‘पाएको म्याटेरियल्स सिलाउन दिएका छौँ । सिलाउँदै गर्ने, बाँड्दै गर्ने हो । चप्पल कारखाना र पेप्सीकोलाको एक गार्मेन्टमा सिलाउन दिएका छौँ । भोलिसम्म केही तयार हुन्छ’, उनले भने ।
पुनसँग तत्काल ५ सयवटा पीपीई बनाउने सामग्री मात्र छ ।
‘देशभरबाट पीपीई बनाउन प्रस्ताव आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग ५ सयजति बन्ने म्याटेरियल्स छ । कसैसँग भए खबर गर्नू, हामी लिन तयार छौँ ।’
सुरुमा शिक्षण अस्पताल काठमाडौं र बीपी कोइराला अस्पताल धरानले पीपीई बनाउन पुनलाई प्रस्ताव गरेका थिए ।
अहिले काठमाडौं, इलाम, भोजपुर ओखलढुंगा, पोखरा, बाग्लुङ, कपिलवस्तु, प्युठान, जाजरकोट, धनगढीलगायतका सरकारी तथा निजी अस्पतालबाट पीपीई बनाइदिन पुनलाई प्रस्ताव आएको छ । तर, उनीसँग कपडा (टफेटा) छैन । उनी टफेटाको खोजीमा छन् ।
पपीई बनाउने खर्च आविष्कार केन्द्रले नै गरेको छ । ‘खर्चको के कुरा गर्नु ! अहिले केन्द्रले नै गरिरहेको छ । जे पर्छ, त्यो गर्दै जाने हो', पुनले भने ।
बिरामीको उपचार गर्न पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट (पीपीई) डाक्टरलाई नभई हुँदैन । त्यसमा पनि कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्न पीपीई नै चाहिने हुन्छ । पीपीई नहुँदा डाक्टरलाई नै कोरोना सर्ने जोखिम हुन्छ ।
७४ लाख बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ?
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १३, २०७६, ०५:४७:००
#काेराेना त्रास #पीपीई